कमजोर आर्थिक अवस्थाको कारण बुद्धिबल दमाइको उपचारमा समस्या ! – ebaglung.com
कमजोर आर्थिक अवस्थाको कारण बुद्धिबल दमाइको उपचारमा समस्या !
२०७५ असार १८, सोमबार १९:२६	Top News, थप समाचार
प्रशान्त घर्तिमगर, बुर्तिबाङ २०७५ असार १८ । ढोरपाटन नगरपालिका—५, चौरका बुद्धिबल दमाईको उपचारमा समस्या देखिएको छ । मोटे आन्द्रामा मासु पलाएपछि उपचारको क्रममा रहेका दमाइको कमजोर आर्थिक अवस्थाको कारण उपचारमा समस्या देखिएको हो ।
करिब ४ बर्ष पहिलेबाट पेट दुख्ने समस्याबाट पीडित बुद्धिबलले बुर्तिबाङका क्लिनिकहरुमा उपचार गर्दा पनि स्वास्थ्यमा सुधार नदेखिएपछि उनी ओछ्यानमै बस्नुपरेको थियो । तर, उनका भाइ नरेश परियार र आफन्त रामअन्जान परिवारले उनको स्वास्थ्य उपचारका लागि विभिन्न देश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिसँग सहयोग संकलन गरेर काठमाडौ स्थित मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । रेडियोलोजी तथा इन्डोस्कोपी गर्दा उनको मोटे आन्द्रामा मासु पलाएर आन्द्रोका टुप्पामा क्यान्सरको लक्षण देखिएको थियो । पलाएको मासु र क्यान्सरको लक्षण देखिएको भाग काट्नलाई अप्रेसन गर्नुपर्ने भएपछि उनी झन समस्यामा परेका थिए ।
अहिले बुद्धिबलको पेटबाट २५ सेन्टिमिटर लम्बाइ र ९ सेन्टिमिटर चौडाइ भएको मासु काटेर फालिएको छ । आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको उनको परिवारले थप उपचारका लागि ठूलो रकम खर्च हुने भएपछि सहयोगको अपिल गरेको छ ।
बुद्धिबल बचाउ अभियानका अभियन्ता रामअन्जान परिवारका अनुसार विभिन्न व्यक्तिहरुबाट संकलन गरिएको करिब ८० हजार र विरामीका भाइ नरेशबाट गरी १ लाख ८० हजार रुपैयाँ रकम खर्च भैसकेको छ । अहिले उपचार पछि बुद्धिबल घर फर्किएको र ३ महिनापछि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा किमोथेरापी गर्नुपर्ने भएकोले उपचारमा समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो । अन्य स्थानमा क्यान्सर फैलन नदिन किमोथेरापी गर्नुपर्ने चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
आर्थिक अवस्था नाजुक भएका विरामीहरुलाई सरकारले १ लाख रुपैँया बराबरको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भएपनि बाँकी रकम जुटाउन अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको अभियन्ता परियारले जानाकारी दिनुभयो । किमोथेरापीको लागि काठमाडौ आवत जावत गर्न र औषधि किन्न सक्ने सम्म अवस्था नरहेकोले सक्दो आर्थिक सहयोग गरिदिन उहाँले सवैलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
४३ बर्षिय बुद्धिबलको परिवारमा अहिले १ श्रीमति र १ छोरा छन् । ४ छोरीहरुको विहे भैसकेको भएपनि छोरा कक्षा १० मा अध्ययनरत छन् । छोरालाई उच्च शिक्षा दिने समयमा आफै विरामी परेपछि उनलाई झन समस्या परेको छ ।
पर्यटन पूर्वाधार र प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित छः मन्त्री लम्साल
बोबाङमा ग्लोबल आइएमइ बैँकको शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तार !